တိုင်းခရီးတစ်ခု endgame ရှိပါတယ်။
DISCLAIMER - မူလကူးယူထားသောအခါ "Incredible Hulk" အပိုင်းကိုမူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်များဖြင့်လုပ်ထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှအတွင်းသို့ချုံ့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်ဟာ "Incredible Hulk" ကိုထည့်သွင်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရမယ်။ မင်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် "Iron Man" သည် Marvel Cinematic Universe ကိုစတင်ခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် "Avengers: Endgame" သည် Infinity Saga ဟုခေါ်သော MCU ၏အဆင့်သုံးဆင့်ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ဤသည်သည် ၁၁ နှစ်ရုပ်ပြစာအုပ်ဇာတ်လမ်းပြောပြခြင်း၏နိဂုံးဖြစ်သည်။ Captain America ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း "ဒါဟာငါတို့ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲပဲ" အားလုံးပြီးသွားပြီ ဤကြီးမားသောရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်“ Iron Man” မှ စတင်၍“ Avengers: Endgame” ဖြင့်အဆုံးသတ်သည့် Marvel Cinematic Universe တစ်ခုလုံး၏နောက်ကြောင်းပြန်ကိုပြန်လည်တင်ပြပါမည်။
"Avengers: Endgame" ဟာအလှမ်းကွာဝေးနေပြီ!
ဗီဒီယိုဖိုင်များ - "Iron Man"၊ "The Incredible Hulk", "Iron Man 2", "Thor", "Captain America: First Avenger", "The Avengers", "Iron Man 3", "Thor: The Dark World" , "Captain America: The Winter Soldier", "Galaxy of Guardians", "Avengers: Ultron Age", "Ant-Man", "Captain America: ပြည်တွင်းစစ်", "Doctor Strange", "Galaxy of Guardians" Vol ။2"," Spider-Man: Homecoming "," Thor: Ragnarok "," Black Panther "," Avengers: Infinity War "," Ant-Man and the Wasp "," Captain Marvel "," Avengers: Endgame "
AVENGERS အပြည့်ရုပ်ရှင် (2021) 4K Ultra HD Marvel Superhero ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
၂၀၂၁ နှင့် ၂၀၂၂ အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးရုပ်ရှင်များ (Trailers)
SNYDERVERSE: Zack Snyder ရဲ့တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်သို့လမ်း - တစ် ဦး နောက်ကြောင်းပြန် (2013 - 2021)
အစားအစာပေါ်ဘီး | Full HD ရုပ်ရှင်များကိုအခမဲ့ဖြစ်သည် Flault Vault
မြို့အပေါ်မစ္စတာ Bean ကို! | ဇာတ်လမ်းတွဲအပြည့်အစုံ | ဂန္ထဝင် Mr Bean
Marvel စတူဒီယို၏ Avengers: Endgame | တိုက်ရိုက်ကော်ဇောကမ္ဘာ့ပထမဆုံး
အဆိုပါစက် | | Full Movie | ထိုင်းနိုင်ငံ | ดแอคชั่นฮฮอลลีวูดด
Marvel's Avengers ရုပ်ရှင်ရုံအပြည့်အ ၀ (၂၀၂၀) 4K ULTRA HD စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ရုံအားလုံး
စူပါမင်း - ဒေါ့မွန် - တရားမျှတမှု (ပရိတ်သတ် ၅ မှ ၅)
ENGSUB [Monkey King: Demon City] ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအတွေးတစ်ခုပဲ။ | YOUKU ရုပ်ရှင်
Защитники / 2017 / Фантастика HD
စင်ဒရဲလားမဟုတ်သောအမျိုးအစား (၂၀၁၈) | ရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံ Paris Warner | တိ Flynn | သားရေလုပ်သမား Gillman
HALO အပြည့်အဝရုပ်ရှင် (2021) 4K ULTRA HD လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ရုံပုံပြင်အားလုံး
အပြည့်အစုံ - John Cena & The Rock vs. The Miz & R-Truth: Survivor Series 2011
စစ်သင်္ဘော 4K HDR ရှိနောက်ဆုံးစစ်ပွဲ
AVENGERS 4: ဗီဒီယိုအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းပါ (၂၀၁၉၉)